2 करोड सम्पती सहित मलाई बिहे गर्ने कोहि छ ? – News543Online
2 करोड सम्पती सहित मलाई बिहे गर्ने कोहि छ ?
October 12, 2021 adminLeaveaComment on2करोड सम्पती सहित मलाई बिहे गर्ने कोहि छ ?
कोरोना महामारी शुरु भन्दा पहिले नै बनाइसकेको घरमा हाल उनी बस्दै आएकी छिन् ।
विकट गाउँ रोल्पामा जन्मेर काठमाडौंमा संघर्ष गर्दै आफूले घर बनाएको कुरामा उनी गौरव गर्छिन् काठमाडौंको कोटेश्वरमा उनले तीन तलाको भव्य विशाल घर बनाएकी छन् । अविवाहित गायिका मगरले अब बिहे गर्ने इच्छा पनि प्रकट गरेकी छन् ।
उनले आफुले घरज्वाँई बस्ने दुलाह खोजिरहेको तर मन मिल्ने मान्छे नपाएको पनि उल्लेख गरिन् ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
थप समाचार पढ्नुहोस :लोकप्रिय गीत झ्यालमा पर्दा छकी गायिका सुमन थापा मगर सवारी दुर्घटना परि घाइते भएकी छिन।अनुहारमै गम्भीर चोट लागेपछि उनि अस्पताल भर्न भएकी छिन।कान्तिपुर अस्पतालमा भर्ना भएकी सुमनको अहिलेको अबस्था भने सामान्य रहेको मोडल उसा सुबेदीले दिउँसोको समयमा बबरमहलमा स्कुटीमा आफ्नो गन्तव्यतिर हिडिरहेकी थापालाई पछाडिबाट तीव्र गतिमा आएको मोटरसाइकलले ठक्कर दिदा उनि घाइते भएकी हुन्। उनलाई ठक्कर दिने मोटरसाइकल र चालक भने फरार छ,ठक्कर दिने चालकको खोजिकार्य अगाडी बढाईएको पारिवारिक श्रोतले जानकारी दिएका छन।
गायक पुष्कल शर्मालाई अकस्मात के भयो?बाहिरियो फेरी यस्तो भिडियो